Iprofayile yeXIKOO-GUANGZHOU XIKOO INDUSTRY CO., LTD
Ngaphezulu kwe-13years iimveliso ezitsha eziphuhlisayo kunye neemodeli ezindala zokuphucula, kukho iintlobo ezingaphezu kwe-20 zeemodeli zesicelo esahlukileyo. Iimveliso eziphambili ze-XIKOO zibandakanya ukupholisa umoya opholileyo, ukupholisa umoya opholileyo, ukupholisa umoya wefestile, umoya opholileyo we-centrifugal, i-solar DC umoya opholileyo kunye neendawo ezipholileyo zomoya. esisetyenziswa ngokubanzi ekhaya, eofisini, ezivenkileni, esibhedlele, kwizikhululo, ententeni, eluhlaza, ivenkile, ivenkile, indawo yokugcina izinto kunye nezinye iindawo.
I-XIKOO inolawulo olungqongqo lomgangatho wemveliso kunye nohlolo kwinkqubo nganye yemveliso Ukusuka kukhetho lwezinto, ukuvelisa itekhnoloji, imveliso, iphakheji kunye novavanyo. Isipholisi somoya sivunyiwe yi-CE, SASO, ROHS, IEC njl.njl.
I-XIKOO inethiwekhi yokuthengisa yasekhaya igubungela amaphondo angama-21 kunye nemimandla engama-86 ephucukileyo, ngaphezulu kwe-112 labasasazi kwilizwe liphela. Kwaye iimveliso zithengiswa kumazwe angama-35 aphesheya nakwimimandla. Ingakumbi ukuphuhlisa abathengi bexesha elide eSaudi Arabhu, Kuwait, Mali, Morocco, Sudan, Vietnam, Malaysia, Thailand, USA, Brazil, Germany, Australia nakwamanye amazwe.
XIKOO Gcina uphando kunye ezintsha, iphumelele ishishini eliphezulu zobugcisa, imveliso eliphezulu zobugcisa kunye nezinye iimbeko. Ndifumene ipatent yoyilo, ipatent yokuqamba kunye nelungelo elilodwa lomenzi. I-fan epholileyo yomoya kukusebenzisa okuphantsi kunye nemveliso enobume bendalo, i-XIKOO ikwaphuhlise umthombo wamandla ombane opholileyo womoya opholileyo. Siyathemba ukuba negalelo ukonga umbane wethu ehlabathini kunye nolwakhiwo nokusingqongileyo friendly ngokusebenzisa XIKOO promotion umoya opholileyo kunye nesicelo.
I-XKIOO ityale imali eninzi kwaye isebenza kuphuhliso lweemveliso ezintsha kwiminyaka yakutshanje. Kwixesha elizayo, siza kuzisa iimveliso ezitsha kubathengi bethu, Wamkelekile ukusebenzisana neXIKOO, Wamkele umbono wakho olungileyo kwaye uphuhlise iimveliso ezintsha ngeXIKOO.